ओलीलाई सिध्याउन भन्दै वरीपरी घुम्नेको यस्तो छ सुची,यी हुन पीएले हत्तु पारेका नेताका बदनाम चम्चे सहयोगी - हाम्रो ईकोनोमी
ओलीलाई सिध्याउन भन्दै वरीपरी घुम्नेको यस्तो छ सुची,यी हुन पीएले हत्तु पारेका नेताका बदनाम चम्चे सहयोगी
केपीओलीको दोस्रो पटक उदय भएसँगै उनको नाम बेचेर कर्मचारीहरु आर्थिक शुभलाभ हात पार्न सक्रिय रहेको भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको चर्काे कुरा गरिरहँदा उनकै दल निकट र उनकै गुट निकटका एक कर्मचारी अहिले सरुवा वढूवा लगायतको काममा सक्रिय रुपमा लागेको तथ्य फेला परेको छ । यसरी ओलीलाई बदनाम बनाउन सक्रिय अरु कोही नभएर गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भई,दुई वर्षदेखि शक्तिको दुरुपयोग गर्दै एउटै मन्त्रालयमा रहन सफल पुण्य ढकाल हुन् । जो गृह मन्त्रालयको निकै आकर्षक मानिने विपत ब्यवस्थापन शाखामा कार्यरत छन् । उनै ढकाल अहिले ओलीलाई बदनाम गरी आर्थिक शुभलाभ हात पार्न सक्रिय छन् । जो आधिकारिक ट्रेड युनियन अध्यक्ष समेत हुन् । उनीसहितका २७ कर्मचारी अस्ति शुक्रवार राती धुलिखेलमा भेला भएर गृहमातहतका कर्मचारीहरु कस्लाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्ने लिष्ट बनाउन व्यस्त रहेको तथ्य गृहकै कर्मचारीहरुले पृष्टाई गरेका छन् । धुलिखेलको हिमालयन होटलमा शुक्रबार बेलुकादेखि शनिवार दिनभर चलेको उक्त सरुवासम्बन्धी बैठकको संयोजन उनै ढकालले गरेका हुन् ।
सो भेलामा गृहमातहतका २७ कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको बुझिएको छ । कर्मचारी स्रोतका अनुसार उक्त भेलामा गृहमन्त्रालयको मानवस्रोत ब्यवमथापन महाशाखाका प्रमुख हरिशरण पुडासैनी, उपसचिवहरु झम्क ढकाल, विष्णु कार्की, कृष्ण आचार्य, यदु पौडेल, ज्ञान ढकाल, मित्रराज शर्मा, खुमकान्त आचार्य, सागर मिश्र,अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टका अध्यागमन अधिकृत महेन्द्र विश्वकर्मा, मनाङका सहायक प्रजिअ जय भण्डारी, शाखा अधिकृत खगेन्द्र मरासिनी, नायबसुब्बा कृष्ण ढकालसहित २७ जनाको सहभागिता रहेको थियो । यो कुराको पृष्टी चाहिँ कसरी भयो भने यही भेलामा सहभागी हुन् गृहका सह सचिव इश्वर पौडेल धुलिखेलतिर जाँदै थिए । बीचबाटोमा पुगेपछि उनलाई माओवादी निकट कर्मचारीका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलको फोन आयो ।
उक्त फोनमा रावलसँग कुराकानी हुँदा रावलले हप्काएपछि उनी बीचैबाटोबाट काठमाडौं फर्किए । गृह मन्त्रालय माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलले सम्हालिरहँदा वादल केही होइन सबै काम केपी ओलीले गर्ने हो सेटिङ म मिलाउछु भन्दै उनले कर्मचारीहरुलाई धुलिखेल डाकेर सरुवाको लिष्ट बनाएको बुझिन्छ । उसो त ढकालका हर्कतहरु यतिमै मात्र सीमित छैन् । विदेश जानका लागि उनी कतिसम्म मरिहत्ते गर्दछन भन्ने तथ्य केही महिना अगाडि अर्काेको नाममा आएको चिठी नै चोरेर दक्षिण अफ्रिकातिर लम्किएबाट पनि प्रष्टै हुन्छ । त्यसैले त राम कुमारी झाक्रीहरुले भनेका हुन केपी ओलीलाई आफ्नैले सिद्धाँउछन् ।
यी हुन नेताका बदनाम चम्चे
पत्याउनुहुन्छ मन्त्रीभन्दा तिनका पिए धनी छन ? नेपालका मन्त्रीहरु जति बदनाम छन तिभन्दा बढी बदनामी कमाएका छन् तिनका पिएहरुले । नयाँ सरकार निर्माणसँगै कस्को पिए को बस्ने ? शक्ति केन्द्रहरुसँग नजिकिएर कसरी लाभ लिने भन्ने ढंगबाट नेताका चम्चाहरु सक्रिय हुन थालेका छन् । तर विगत हेर्ने हो भने अधिकांश नेताका पिएहरु गनाएका छन् । चाहे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार मनहरि तिमिल्सिना हुन वा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियार । परियारले वालुवाटारबाटै ५० लाख रुपैंया गायव गरी अनलाइन खोलेको खबर आइसकेको छ । यसरी नेताका वरपर बसेर नेतालाई पनि बदनाम गराउने र आफू पनि वदनामी कमाउनेहरुको सख्या धेरै छ । प्रायजसो नेताका निकट रहेकाहरु कहिँ न कहिँ दाग लागेकै छ । पदीय आचरण बिर्सेर हुने र नहुने ‘सेटिङ’ मिलाउनै व्यस्त भएपछि धेरै पीएहरुले बदनामी कमाएका छन् । मनहरीजस्तै बदनामी कमाउने पीएहरुमा सुशील कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकाल, मृदुला कोइरालासम्म हुन् । यस्तै झलनाथ खनालका प्रधानमन्त्री हुँदा निर्मल भट्टराई पीए थिए । जो पछाडि वदनाम भए । एमाले छाडेर नयाँ शक्तितिर पुगी अन्तत त्यहाँ टिक्न नसकी पूरानै घर फर्किएका छन् ।
यस्तै वदनाम पीए हुन रामबाबु अधिकारी । यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पीए रमेश आचार्य, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका पीए विजयविराज विष्ट समेत नेताहरुको नाम बेच्दै आर्थिक शुभलाभ हात पार्ने लागेपछि बदनाम भई त्यहाँबाट निकालिएका व्यक्तिहरु हुन् । उता,कुनै समय जेपी गुप्ताका पीए केशव झा गुप्ताको नाम बेच्दै न्युरोडका व्यापारीहरुसँग असुल्ल लागे । पछि जेपीले जाल पाएर उनलाई पार्टीबाट निकाले । पछि उनी शरदसिंह भण्डारीको पछि लागेर अहिले राजपाको महासचिव बन्न आइपुगेका छन् । वदनाम पृष्टभूमीका झा सायद यही कारण होला राजपाबाट प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत पराजय बेर्होन परेको । यी मात्र होइन, प्राय हरेक नेताका पछाडि लाग्ने र उनका पीएहरु कुनै न कुनै कारणबाट बदनाम छन् । खोज्ने हो भने धेरै भेटिन्छन् ।
चिरिबाबुको के हो यस्तो चर्तिकला ?
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु मर्हजनले पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवासँग एक हजार बाजी जिते । मेयर पद जितेर देखाए देउवाले एक हजार दिने घोषणा जो गरेका थिए सोही बमोजिम उनले एक हजार हात पारेका थिए । गुटभन्दा माथि उठेर काम गर्छन भन्ने आशा गरेर हिजो चिरिबाबुलाई मेयर पदमा जिताएकाहरु अहिले थकथकाउन थालेका छन् । कारण हो चिरिबाबु पनि पदमा पुगेपछि अरुहरु जस्तै भए । उनलाई पनि जनताको कामभन्दा विदेशको शयर प्यारो लाग्न थाल्यो । यो किन यसो भनिएको हो भने चिरिबाबु मेयर पदमा निर्वाचित भएको दश महिना पुग्दैछ । यो बीचमा उनी दशै पटक विदेश शयरमा निस्किए । अर्थात हरेक महिनामा एक पटक विदेश भ्रमणमा निस्कनु चिरिबाबुको तालिका नै भएको छ । महिनामा पन्ध्र दिन विदेश भ्रमण,पन्ध्र दिन समारोहहरुको उद्घाटको रिबन काटने काममै व्यस्त हुन थालेपछि सेवाग्राहीहरुले आक्रोश पोख्ने नै भए ।
चिरिवावुको एक चौथाइ कार्यकाल सकिँदा पनि कुनै गतिलो काम गर्न सकेका छैनन् । उनी तीन सदस्यीय टोली सहित एक साता जापान भ्रमणमा निस्किएर हिजो मात्र स्वदेश फर्किएका छन् । महर्जन यो सहित तेस्रो पटक जापान घुमेर फर्किएका हुन् । उनको साथमा वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष हिटलर शाक्य र कार्यापालिका सदस्य सुप्रभा शाक्य छन् । उनी यस अघि वर्मा, श्रीलंका, कोरिया, थाइल्याण गएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १ वर्ष वित्न लागेको अवस्थामा जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति हुने काम नगरेको महानगरबासीको गुनासोलाई वेवास्ता गर्दै महर्जन दशौं पटक वैदेशिक भ्रमणमा निष्किएका हुन् । मेयर त फर्किए अब उपमेयर गीता सत्याल विदेश भ्रमणमा निस्किने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । महानगरपालिकाले अगाडि सारेका थुप्रै योजनाहरु अलपत्र छन् । चुनावका बेलामा मेयर महर्जनले दिएका अन्तवार्तामा तीन महिनामा धुलो हट्ने घोषणा गरेका थिए । आखिर विद्यासुन्दर शाक्यका लागि मात्र गाली गर्नेहरुका लागि चिरिबाबु पनि उनीभन्दा गतिला होइनन् भन्ने उदाहरण चाहिँ विगतमा चिरिबाबुले बोलेका भिडियोहरु हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । विद्यासुन्दर शाक्य जातीय चिन्तनबाट माथि नउठ्ने र आफ्नै सम्प्रदायका बाहेक अरुसँग भेटै नगर्ने,अनि चिरिबाबुलाई कार्यकक्षमा कहिले भेट्न नसकिने यस्तै पीडामा गुज्रिरहेछन महानगरवासीहरु ।
उता,अर्काे रमाइलो छ स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव दिनेश थपलियाको । आफूलाई कम्युनिष्ट हुँ भन्ने यद्यपि उनी कांग्रेस सरकारको हित अनुकुल हुनेगरी काम गर्ने कर्मचारीका रुपमा चिनिने गरेका छन् । उनै थपलियाले हरेक स्थानीय निकायका लागि ३ देखि ५ जनासम्म कर्मचारी करारमा भर्ती गर्नेगरी एउटा प्रस्ताव तयार गरिरहेका छन् । सो प्रस्ताव क्याविनेटबाट पास भएका खण्डमा झण्डै २ हजारदेखि तीन हजार दलका कार्यकर्ताहरुले जागिर पाउनेछन् ।